Koonfurta Suudaan - ALinks
Maqaallada Ku Saabsan Koonfurta Suudaan
sida shaqo looga helo koonfurta sudan
November 19, 2020 Maitri Jha shaqo, South Sudan
Koonfurta Suudaan waa waddankii ugu dambeeyay ee adduunka xorriyadda ka helay Suudaan sanadkii 2011. Koonfurta Suudaan waxaa sidoo kale loo yaqaannaa Jamhuuriyadda Koonfurta Suudaan waana tan ugu weyn ee ay ku noolyihiin dad gaaraya 37 milyan (Qiyaasta Qaramada Midoobay)
Eeg shuruudaha Visa ee Koonfurta Suudaan
September 28, 2020 Maitri Jha South Sudan, fiisada
Koonfurta Suudaan waa waddanka ugu cusub adduunka. Tan iyo markii ay xorriyadda ka qaadatay Jamhuuriyadda Suudaan sanadkii 2011 oo keliya. Sidoo kale, caasimada dalka waa Juba. Si kastaba ha noqotee, weli maahan waddan caan ku ah dalxiiska. Waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay
Sida loo Dalbo Magangalyo South Sudan
August 30, 2020 Maitri Jha qaxootiga, South Sudan
Qormadan, waxaad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan sida magangelyo looga dalbado Koonfurta Suudaan. Waxay ku taal waqooyi-bari Afrika. Sidoo kale, Koonfurta Suudaan waa waddanka ugu da'da yar. Waxay ka xorowday Suudaan 2011. Waxaa jira xeerar yar oo ay dejiso UNHRC si loo helo
Ogow Nidaamka Waxbarshada ee Koonfurta Suudaan!
April 30, 2020 Karuna Chandna South Sudan, waxbarasho
Nidaamka waxbarashada ee Koonfurta Suudaan waxaa lagu qeexay kharash yar. Waxay leedahay waxtar hoose laakiin nidaam dalab badan. Barnaamijyada qaranka ', dowlad dhisid, iyo nabad dhisid. Dadaalladaasi waxay cadaadis sare saaraan nidaamka waxbarashada. Si loo koro, loo jaro sinnaan la'aanta, iyo in
Nidaamka Gaadiidka ee Koonfurta Suudaan
February 18, 2020 Antika Kumari soo qaado, South Sudan
Qaabka habka gaadiidka ee Koonfurta Suudaan wuxuu ka kooban yahay afar qaab oo kala ah: wadada, tareenka, wabiga, iyo gadiidka hawada oo ah kan ugu weyn ee gaadiid raaca. Waxqabadka ugu weyn ee Koonfurta Suudaan ka socda ee dhinaca badda waa marinka Mombasa ee Kenya, oo inta badan loo tixgaliyo
Waqtiga ugu Fiican ee Soo booqashada iyo Sahaminta Koonfurta Suudaan
February 13, 2020 Antika Kumari South Sudan, safarka
Waqtiga ugu wanaagsan ee booqashada South Sudan Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu baari karo South Sudan waa Disember ilaa horraanta Febraayo. Waxaad dhif ah ku arki doontaa dhibic roob bilow ah sanadka, marka qorrax-soo-baxa-ilaa-fiidka iyo kuleylka - laakiin ma ahan wax aad u yar